Kartuumada shaandhada birta ah ee aan kala go'a lahayn waxay ka samaysan tahay hal lakab ama mesh bir ah oo badan. Tirada lakabyada iyo mesh-ka ka samaysan mesh-ku waxay ku xidhan yihiin xaaladaha adeeg ee kala duwan iyo isticmaalka. Saxnaanta shaandhaynta waa feejignaan sare, cadaadis sare iyo toosnaan wanaagsan. Waxay ka samaysan tahay bir aan-xawaag lahayn.
Shaandhee walxaha kartoonada
Astaamaha kartoonada shaandhada
Hal iyo lakabyo badan oo alxanka shaandhada shaandhada, shaandhaynta iyo shaashadda shaandhaynta waxay leeyihiin shaandhayn wanaagsan ilaa 1-500um qaybo iyo dareerayaal, oo leh qulqul weyn halkii cutubba, waxaana dib loo isticmaali karaa nadiifinta ka dib.
Habka wax soo saarka ee kartoonada shaandhada
Ka dib goynta saxan - wareega - alxanka - wareega - daaweynta dusha - samaynta
Nooca kartoonada filter
Waxaa jira nooca dambiisha, nooca dhegta labanlaaban, nooca flange, nooca dambiisha kartoonada filter, nooca interface dun iyo qaabab kale.
Kartuumada birta shaandhada, maaraynta shabkada, foosto saafiga ah iyo tuubada shaandhada waxa lagu alxamaa shabagga birta ah, shabagga feerka birta, shabagga birta, saxanka birta ah iyo saxanka birta. Alxanka lakabka keli ah iyo alxanka lakabka badan ayaa la isticmaali karaa. Alxanka hal lakab ka dib, kartoonka shaandhada birta ah, maamulka shabakada, foosto saafiga ah, walxaha shaandhada iyo tuubada shaandhada ayaa la isku dhejin karaa oo la isku dari karaa si loo sameeyo sifaynta lakabyo badan.
Kartuuji shaandhaynta birta-la'aanta ah waxa uu leeyahay nooca dambiisha, nooca dhegta labbada ah, nooca flange, nooca dambiisha kartoonada filter, nooca interface dun iyo qaabab kale.
1. Cunsurka shaandhada saxda ah ee birta ah ayaa leh porosity sare, dallaal hawo wanaagsan, iska caabin hoose iyo cadaadis kala duwan oo hooseeya;
2. Ka dib markii walxaha shaandhada saxda ah ee birta aan laalaabin, aagga shaandhaynta waa weyn yahay, cadadka wasakhduna waa weyn tahay;
3. Curiyaha shaandhada saxda ah ee birta ah waxay u adkaysataa heerkulka sare iyo daxalka, waxayna ku habboon tahay shaandhaynta dareeraha viscous sare;
4. Waxqabadka dib u soo kabashada wanaagsan, dib ayaa loo isticmaali karaa ka dib nadiifinta kiimikada, heerkulka sare iyo nadiifinta ultrasonic;
5. Dhammaan qaab dhismeedka birta ah, waafaqid kiimikaad ballaaran;
Xuduudaha farsamada ee ugu muhiimsan
1. Heerkulka shaqada ee ugu badan ee walxaha shaandhada saxda ah ee birta: ≤ 500
2. Saxnaanta shaandhaynta: 1-200um
3. Heerkulka shaqada: 0.1-30mpa
4. Shaandhaynta walxaha shaandhaynta: 5-40 inji (la beddeli karo)
5. Nooca Interface: 222, 226, 215, M36, M28, M24, M22, M20 interface threaded
Baaxadda codsiga ee kartoonada filter
Batroolka kiimikaad, sifaynta dhuumaha saliida, shaandhaynta qalabka warshadaha daaweynta biyaha, qalabka shidaalka, qalabka mishiinada injineernimada, sifaynta shidaalka, habaynta cuntada.
Hore: Kartridge sinteed birta aan fiicnayn
Xiga: Mesh nikkel ah oo tayo sare leh 10-300 mesh
304/316 Saxanka Shaandheeyaha Birta ee Sintered, Rimmed Fi...
Shaandhaynta birta aan fiicnayn ee shabagga ah ee giraanta giraanta ah (miiraha saxanka, baakadaha shaandhaynta, saxanka shaandhaynta mesh silig). Nooca Walxaha: Mesh birta ah, mesh naxaas ah, mesh naxaas ah, maro silig madow, mesh nikkel, mesh monel, mesh degdega ah, mesh inconel iwm SUS304 Saxannada Mesh birta ah ee aan birta lahayn ee leh cidhifyada ayaa si caan ah loo isticmaalaa shaashadda sifaynta warshadaha batroolka. Sifaynta Shaashada Fasalka Birta Aan-Aabaha lahayn ee Mesh Discs-ka waa baakado fidsan oo laga soo shaqeeyay 304, 304L ama 316 ss maro mesh ah oo leh e...
Lakab badan oo aan lahayn birta shaabadaynta...
Shaandhee macluumaadka badeecada Walxaha: mesh silig, mesh birta ah, marada xariirta madow, mesh galvanized, iwm Astaamaha: shaandhada wareegtadu waxay leedahay faa'iidooyinka aagga weyn ee waxtarka leh, isticmaalka habboon iyo kharash yar. Kala-soocidda: waxay noqon kartaa hal-lakab ama lakabyo badan, ama ka samaysan bir aan lahayn ama xariir madow. Codsiga: inta badan waxaa loo isticmaalaa sifaynta in caag iyo warshadaha balaastigga ah iyo baaritaanka hadhuudhka, saliidda iyo ph ...
Shaandheeyaha Tubada Shaashada Daloolan & Dambiiladaha S...
Gudub Hababka baaska ee la heli karo ee birta daloolsan waxaa ka mid ah wareegsan, labajibbaaran, laba geesood, elliptical iyo meelo gaar ah. Qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo tuubooyinka daloolin birta ah waxaa ka mid ah 304, 304L, 316, 316L. Birta kaarboon sidoo kale waa la isticmaali karaa. Tuubbada birta aan daloolin ee daloolku waxay ka samaysan tahay saxan bir ah oo T304 ah ama saxan bir ah oo t316 ah. Taarikada tuubooyinkani waxay leeyihiin godad taxane ah, kuwaas oo adiga laguu qaabayn karo. Qaababku way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran...
Biraha birta ah ee Johnson-birta aan lahayn v-wire ...
Faa'iidooyinka Johnson steel v-wire ceel tuubada soo saaraha 1. Dhuumaha shaashadda leh meel weyn oo furan ayaa ku habboon dhismaha ceelasha biyaha, ceelasha saliidda iyo gaaska. 2. Shaashadda oo leh kharash yar oo hawlgal ah iyo dhul weyn oo macdanta laga qodo ayaa ku habboon gelitaanka biyaha dhulka hoostiisa. Khayraadka biyuhu waxay hoos u dhigi karaan heerka biyaha waxayna badbaadin karaan isticmaalka tamarta. 3. Isla shuruudahaas, aagga sare ee furan wuxuu samayn karaa xawaaraha dhulka hoostiisa ...